बन्दाबन्दीले जनसंख्या बढ्ने संकेत : नियोजनका साधन किन्न पाइदैन ! के हुँदैछ अवस्था ? -
Home जीवनशैली बन्दाबन्दीले जनसंख्या बढ्ने संकेत : नियोजनका साधन किन्न पाइदैन ! के हुँदैछ...
बन्दाबन्दीले जनसंख्या बढ्ने संकेत : नियोजनका साधन किन्न पाइदैन ! के हुँदैछ अवस्था ?
काठमाडौ । लदकडउन ९बन्दाबन्दी० ले लामो समय श्रीमान श्रीमती सँगै बस्ने समय मिलेको छ । तर के गर्नु परिवार नियोजनका साधन किन्ने ठाउँ छैन । प्रहरीले कहाँ हिँडेको भनेर सोध्यो भने कण्डम किन्न भन्नपनि मुस्किल दिन रात नियन्त्रण गर्नपनि मुस्किल । अहिले नेपालका अधिकांश जोडी यो मारमा छन् । यसले अनिच्छित गर्भ बस्ने खतरासँगै असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको ज्यानै जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ।
नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका उपाध्यक्ष अञ्जु आचार्यलाई वैशाख दोस्रो सातादेखि अनौठो प्रकारको समस्याका लागि महिलाहरुले फोन गर्न थालेका छन् । बाहिर भएका श्रीमान् घरमा लामो समय बस्दा अनिच्छित गर्भ बस्न सक्ने उनीहरुको चिन्ता थियो । उपाध्यक्ष आचार्य भन्छिन्, “स्वास्थ्य चौकी टाढा भएका कारण जान नसक्दा परिवार नियोजनका साधन सकिएको छ । अनिच्छित गर्भ बस्न सक्ने गुनासो गरेर दैनिकजसो फोन आउन थालेको छ।” बन्दाबन्दीले श्रीमान् श्रीमती नै घरमा हुँदा धेरैसँग यस्ता साधन सकिएको छ।
घर बाहिर बसेकाहरु एक्कासी घर फर्किँदा पनि मौजाद नभएकाहरु समस्यामा परेका हुन् । नियमित प्रयोगकर्तासमेत साधन लिन स्वास्थ्य संस्था जान सकेका छैनन् । माग बढी भएकाले कतिपय स्वास्थ्य चौकीमा मौजाद सकिँदै गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाले बन्दाबन्दी शुरु हुनुअघि नै परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्दै आएकालाई कम्तीमा तीन महिनाको मौज्दात राख्न सचेत गराएको थियो ।
प्रदेश र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई पनि तीन महीनाका लागि मौज्दात राख्न पहिले नै भनिएको महाशाखा अन्तर्गत परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य प्रजनन शाखा प्रमुख कविता अर्यालले जानकारी दिइन्। परिवार नियोजनका साधन माग करीब २० प्रतिशतसम्म बढेको पाइयो । यो धेरैले ध्यान नदिएको विषय रहेछ । तर, यसलाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राख्नुपर्ने रहेछ।” तर सरकारले यसलाई राखेको छैन । यसैले गाउँ देखि सहरसम्मका जोडी समस्यामा परेका छन् ।